Vaovao - Milamina ny fangatahan'ny fitaovana fanapahana karbida, ary mivoaka ny fangatahana fitaovana tsy mahazaka akanjo
Milamina ny fangatahan'ny fitaovana fanapahana karbida, ary mivoaka ny fangatahan'ny fitaovana tsy mahazaka
Anisan'ireo fitaovana fanapahana, karbida simenitra no ampiasaina matetika ho fitaovana fanapahana fitaovana, toy ny fitaovana fanodinana, fanapahana fikosoham-bary, planer, bitika, fitaovana mankaleo, sns. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanapahana vy, metaly tsy ferrous, plastika, fibre simika, grafita, vera, vato ary vy tsotra, ary koa ho an'ny fanapahana fitaovana marefo toy ny vy mahatohitra hafanana, vy vy, vy manganese avo ary vy vy fitaovana. Fitaovana milina no tena mahatsapa ny fanapahana. Amin'izao fotoana izao, ny habetsan'ny karbaona simenitra ampiasaina amin'ny fanapahana fitaovana dia mitentina eo amin'ny 1/3 amin'ny famokarana totalin'ny karbaona simenitra ao Shina, izay ny 78% dia ampiasaina amin'ny fitaovana fantsom-boaloboka ary 22% no ampiasaina amin'ny fitaovana azo arovana.
Fitaovana fanapahana no tena ampiasaina amin'ny famokarana. Ny fitaovana fanapahana karbida simenitra dia be mpampiasa amin'ny fanapahana haingam-pandeha noho ny toetrany tena tsara (tanjaka avo, henjana avo, hamafin'ny haavo, fahamendrehana mafana tsara ary hamafin'ny hafanana). Indostrian'ny nentim-paharazana any ambanivohitra toy ny milina sy fiara, sambo, lalamby, bobongolo, lamba, sns. ny sehatr'asa avo lenta sy mipoitra dia misy ny aerospace, indostrian'ny fampahalalam-baovao, sns. Anisan'ireny ny milina sy ny famokarana fiara no sehatra fampiharana lehibe indrindra amin'ny fitaovana karbida simenitra amin'ny fanapahana vy.
Voalohany indrindra, ny vahaolana fanodinana mekanika dia vokatra fototra amin'ny rojom-pandraharahana karbida vita amin'ny simenitra, izay miompana amin'ny sehatry ny famokarana sy ny fanodinana any ambanivohitra toy ny fitaovan'ny milina CNC, ny aerospace, ny fanodinana bobongolo mekanika, ny fanamboarana sambo, ny fitaovana enti-miasa an-dranomasina, sns. an'ny Birao nasionalin'ny antontan'isa, ny tahan'ny fitomboana isan-taona amin'ny sehatry ny indostrian'ny fanamboarana fitaovana manontolon'i Shina dia nitombo nandritra ny roa taona nisesy taorian'ny nivoahany ny taona 2015. Tamin'ny 2017, ny sandan'ny vokatra amin'ny indostrian'ny mpamokatra fitaovana ankapobeny dia 4,7 trillion yuan , miaraka amin'ny fiakarana 8,5% isan-taona; ny sandan'ny vokatra indostrian'ny orinasa mpamokatra fitaovana manokana dia 3,66 trillion yuan, miaraka amin'ny fiakarana 10,20% isan-taona. Rehefa nidina sy nihena indray ny fampiasam-bola raikitra amin'ny indostrian'ny famokarana, dia hitombo hatrany ny fangatahana vahaolana amin'ny fikirakirana ny indostrian'ny milina.
Amin'ny famokarana fiara, iray amin'ireo fitaovana lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny famokarana fiara dia ny bobongolo fitaovana, ary ny bobongolo fitaovana karbida simenitra no singa manandanja indrindra. Raha ny angon-drakitra nataon'ny National Bureau of statistika, ny totalin'ny famokarana fiara an-tsokosoko dia nitombo hatramin'ny 9.6154 tapitrisa tamin'ny 2008 ka hatramin'ny 29.942 tapitrisa tamin'ny taona 2017, miaraka amin'ny taha mitombo 12,03%. Na dia mitontongana aza ny fitomboan'ny tahan'ny fitomboana tao anatin'ny roa taona lasa izay, teo ambanin'ny fototra avo lenta, ny fitakiana fanjifana fitaovana fanapahana karbôida simenitra eo amin'ny sehatry ny fiara dia hitazomana hatrany.
Amin'ny ankapobeny, eo amin'ny sehatry ny fanapahana, ny tahan'ny fitomboan'ny indostrian'ny fiara sy ny milina nentim-paharazana dia milamina, ary ny fangatahana karbida simenitra dia mitombina ihany. Tombanana fa amin'ny taona 2018-2019, ny fihinanana fitaovana fanapahana karbida simenitra dia hahatratra 12500 taonina sy 13900 taonina isan-karazany, miaraka amin'ny taha ambony mihoatra ny avo roa heny.
Jeolojia sy harena ankibon'ny tany: mitaky fanarenana
Mikasika ny fitaovana ara-jeolojika sy mineraly, ny karbida simenitra dia ampiasaina matetika ho fitaovana fandavahana vato, fitaovana fitrandrahana ary fitaovana fandavahana. Ny endrika vokatra dia misy ny fitrandrahana vato ho an'ny fitrandrahana perkusiana, ny fandavahana ho an'ny fikarohana ara-jeolojika, ny DTH Drill ho an'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny fitrandrahana solika, ny fantsom-bokotra, ny fantsom-bokatra arina ary ny fandavahana ny indostrian'ny fitaovana fananganana. Ireo fitaovana fitrandrahana karbida vita amin'ny simenitra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny arintany, solika, mineraly vy, fananganana fotodrafitrasa ary lafiny hafa. Ny fanjifana karbida simenitra amin'ny fitaovana ara-jeolojika sy fitrandrahana dia mitentina 25% - 28% amin'ny lanjan'ny karbida simenitra.
Amin'izao fotoana izao dia mbola eo amin'ny sehatra afovoan'ny indostrialy i Shina, ary mihena ny tahan'ny fitomboan'ny fangatahana angovo, fa ny fangatahana kosa dia hijanona ho ambony. Tombanana fa amin'ny taona 2020, ny fanjifana angovo voalohany ao Shina dia manodidina ny 5 miliara taonina ny arina arintany, voa vy 750 tapitrisa taonina, varahina voadio 13,5 tapitrisa taonina ary aliminioma tany am-boalohany 35 tapitrisa taonina.
Eo ambanin'ny asa fivelaran'ny fangatahana be dia be, ny fihenan'ny haavon'ny tahan'ny mineraly dia manery ny orinasam-pitrandrahana hampitombo ny fandaniambola. Ohatra, ny salan'isan'ny voa volamena dia nidina hatramin'ny 10,0 g / T tany am-piandohan'ny taona 1970 ka hatramin'ny 1,4 g / T tamin'ny taona 2017. Io dia mila mampitombo ny vokatra voajanahary mba hitazonana ny fitoniana amin'ny famokarana vy, ka mitarika ny fangatahana fitaovana fitrandrahana hitraka.
Ao anatin'ny roa taona ho avy, satria miakatra hatrany ny vidin'ny saribao, ny solika ary ny vy, antenaina fa hitombo hatrany ny fahavitrihan'ny fitrandrahana sy ny fikarohana, ary hitombo hatrany ny fangatahana karbida simenitra ho an'ny fitaovana ara-jeolojika sy fitrandrahana. Antenaina fa hitazona hatrany amin'ny 20% ny tahan'ny fitomboan'ny tinady amin'ny taona 2018-2019.
Manaova fitaovana maharitra: famotsorana ny fangatahana
Mitafy karbida simenitra mahatohitra no tena ampiasaina amin'ny vokatra rafitra mekanika amin'ny sehatra tsy mahazaka fitafiana isan-karazany, ao anatin'izany ny bobongolo, ny tsindry ambony ary ny lavaka mamiratra avo lenta, ny faritra tsy mahazaka, sns. Amin'izao fotoana izao, ny karbida vita amin'ny simenitra ampiasaina amin'ny lasitra isan-karazany 8% amin'ny totalin'ny vokatra karbida simenitra, ary ny lavaka ho an'ny tsindry avo sy fanoherana ny hafanana avo dia mitentina eo amin'ny 9% amin'ny totalin'ny karbida simenitra. Ny ampahany tsy mahazaka dia misy ny môtô, lalamby mpitantana, plunger, baolina, pin anti-skid kodiarana, lovia fanala oram-panala, sns.
Raiso ho toy ny ohatra ny lasitra, noho ireo indostria mampiasa bobongolo be fahatany, ao anatin'izany ny fiara, kojakojan-tokatrano, izy io sy ny indostrian'ny mpanjifa hafa mifandraika amin'ny fiainam-bahoaka isan'andro, eo ambanin'ny fanavaozana ny fanjifana, ny fanavaozana ny vokatra dia haingana sy haingana kokoa , ary ny takiana amin'ny lasitra dia avo kokoa sy avo kokoa ihany koa. Tombanana fa ny tahan'ny fitomboan'ny fitakiana karbida simenitra maty amin'ny 2017-2019 dia manodidina ny 9%.
Ho fanampin'izany, ny fangatahana karbôida simenitra ho an'ny lavaka faneriterena avo lenta sy hafanana avo lenta ary ireo faritra mekanika tsy mahazaka akanjo dia antenaina hitombo 14,65% sy 14,79% amin'ny taona 2018-2019, ary ny fangatahana dia hahatratra 11024 taonina sy 12654 taonina .